अनुराधा कोइरालाको जीवन : माइती नेपाल बन्द गर्ने सपना छ | Ratopati
म गुरुङकी छोरी, कोइरालाको छोरासँग प्रेम विवाह भयो
personकुवेर गिरी exploreकाठमाडौं access_timeफागुन २२, २०७७ chat_bubble_outline0
अनुराधा कोइराला प्रसिद्ध समाजसेवी हुन् । माइती नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाको अध्यक्षसमेत रहेकी कोइरालाले यो संस्थामार्फत करिब ४० हजार चेलीबेटीको उद्धार गरिसकेकी छन् । विशेषतः भारतीय कोठीहरूमा बेचिएर नारकीय जीवन बिताउन बाध्य नेपाली चेलीबेटीहरूको उद्धार तथा पुनःस्थापनामा क्रियाशील उनले यही कामका कारण सन् २०१० मा ‘सीएनएन हिरो’को सम्मान समेत पाएकी छिन् । ओखलढुङ्गा जिल्लाको रुम्जाटारमा गुरुङ परिवारमा जन्मिएकी उनले कोइराला परिवारमा प्रेम विवाह गरेकी हुन् । भारतबाट बीए पास गरेकी उनले २०१४ मा मदर टेरेसा सम्मानसमेत जितेकी छिन् । उनी २०७४ मा प्रदेश ३ को प्रमुखसमेत नियुक्त भएकी हुन् ।
आफ्नो स्वस्थ्य, परिवार र भविष्य केही नभनी नेपाली समाजलाई महिला हिंसामुक्त बनाउने अभियानमा निरन्तर लागिपरेकी अनुराधा कोइरालाको जीवनका विभिन्न पाटा रातोपाटीको ‘मेरो जीवन’ स्तम्भमा छोटकरीमा उनकै शब्दमा ।
पहिले पुस्तक धेरै पढ्थेँ । अहिले पुस्तक अध्ययनमा कमी भएको छ । जबदेखि माइती नेपालको काम सुरु गरेँ त्यो समयदेखि पुस्तक अध्ययन गर्न भ्याइनँ ।
पत्रपत्रिका धेरै पढ्छु, रुचि भएका किताबसमेत पढ्ने गरेको छु । पढ्नेभन्दा पनि मेरो महिला बालबालिकाको सेवामा काम गर्ने शोख छ । पहिले पहिले त सबै खालका किताब पढ्थेँ ।
खेलकुदमा रुचि छ, किन नहुनु नि । स्कुल पढ्दा म हक्की खेलाडी थिए । मेरो खुट्टामा अहिले हेर्नुभयो भने हक्कीले लागेको डामैडाम देख्न सक्नुहुन्छ ।
त्यो समय मेरो टिमले हक्कीबाट विभिन्न पुरस्कारसमेत हात पर्दथ्याे । अहिले पनि खेलकुदमा रुचि छ ।
त्यसैले म माइती नेपालका बच्चाहरुलाई तेक्वान्दोदेखि भलिबल, बास्केटबल, फुटबल लगायत सबै खेल खेल्नुपर्छ भनेर सिकाउने, खेल्न लगाउने गर्छु । सबै खेल हेर्न पनि मनपर्छ ।
त्यस्तै २०२६, ०२७ सालमा दिनेशप्रसाद कोइरालासँग मैले प्रेम विवाह गरेको हो । म गुरुङको छोरी हुँ । प्रेम विवाह कोइरालाको छोरासँग भयो । म बानेश्वरको एक स्कुलमा पढाउँथे । उहाँको घर त्यही नजिक थियो ।
स्कुल जाने, फर्कने क्रममा उहाँसँग देखभेट भैरहन्थ्यो । सोही क्रममा उहाँसँग प्रेम बस्यो । प्रेम बसेको ३ वर्षपछि हामीले विवाह गर्यौँ । सो समय प्रेम विवाह गर्नु निकै कठिन थियो ।
मेरो मुख्य पेसा शिक्षक हो । मैले २६ वर्ष शिक्षण पेसा गरे । पहिले सुरुमा डिल्लीबजारमा रहेको न्यू अङ्ग्रेजी बोडिङ स्कुलमा पढाउँथे । त्यो पछि बानेश्वरमा सरेर अमर आदर्श बन्यो । त्यसपछि मार्टियसमा पढाएँ ।
मैले आफैले डिल्लीबजारमा स्कुल समेत खोलेको थिए । त्यो स्कुलको नाम त्रिशक्ति थियो । त्रिशक्ति नाम राख्नुको कारण मेरो देवी दुर्गा प्रतिको आस्था पनि हो । अहिले पनि त्यो स्कुल चलिरहेको छ ।
अहिलेको मेरो सपना माइती नेपाल बन्द गर्नेछ । मैले योभन्दा सबैले यो पागल भइछ भन्छन् होला । यो मुलुकका बालबालिका तथा महिलाहरुलाई कुनै पनि दुव्र्यवहार नहोस्, उनीहरुको कुनै प्रकारको बेचबिखन नहोस्, कसैको पनि यौन हिंसा नहोस् भन्ने मेरो सपना छ । देशमा यस्तो क्रियाकलाप भएन भने माइती नेपाल किन चाहियो ? त्यसैले मैले माइती नेपाल बन्द गर्ने सपना छ भनेकी हुँ । मेरो एक मात्र सपना यही हो ।
चेलीबेटी बेचबिखन मुक्त देश बनाउन चाहन्छु म । यस्तो देश भयो भने माइती नेपालको के काम ? मैले माइती नेपालमार्फत ४० हजार चेलीबेटीहरूको उद्धार गरिसकेकी छु ।
मापसे छुँदै छुन्न । मेरो बाबु, बाजे कसैले पनि मापसे गरेनन् । म गुरुङको छोरी हो । गुरुङले खान्छ नै भन्ने मान्यता समाजमा रहेको पाइन्छ ।
मेरो बाजे साधु हुनुहुन्थ्यो । फुपूहरू प्रणामी थिए । मेरो बुबा कर्नेल हुनुहुन्थ्यो । मेरो घरमा कसैले पनि मापसे गर्दैन थिए । अहिले पनि मेरो घरमा चल्दैन ।
मानिस हुँ, जानी नजानी भूल भए होलान् । जब मेलै विवाह गरे । मेरो बाबाले अङ्ग्रेजीमा एक लाइन लेख्नुभएको थियो ‘आई टुक यू एज माई सन् टुडे यू ह्यब बिट्रेड मी’ (मैले तिमीलाई आफ्नो छोरा माने तर तिमीले आज मलाई धोका दियौ) । उहाँले मलाई छोराजस्तो गर्नुहुन्थ्यो । तर मैलै धोका दिएँ ।
परिवारको सहमतिबिना विवाह गर्नु मेरो जीवनको ठूलो भूल थियो ।
रोग त धेरै छ मलाई । डाक्टरहरुले रेस्ट गर्नुस् भनेर भनेका छन् । म भ्याउदिनँ । डाइबेटिज, प्रेसर लगायतका रोग भने भगवानको कृपाले अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
मृत्यु स्वाभाविक हो । जन्मेपछि एक दिन मर्नैपर्छ । मरेर केही लाने होइन । मृत्यु सत्य हो । सुखद मृत्यु होस्, सेवा गर्दागर्दै मर्न पाइयोस् भन्ने छ ।